Evangelization and Ecumenism - Mandalay Catholic Archdiocese
Commission on Evangelization and Ecumenism
သာသနာတော် ပြန့် ပွားရေးနှင့် ခရစ်ယာန်အသင်းတော်များ စည်းလုံးညီညွတ်ရေးကော်မရှင်
A Community centered on Christ enlightened by the Holy Spirit, guided by our Blessed Mother and inspired by the Diocesan Pastoral Plan seeks the unity of all the Christians Churches and strives together to build the Kingdom of God on earth.
ခရစ်တော်ဘုရားရှင်ကို ဗဟိုပြုပြီး ၀ိညာဉ်တော်ဘုရား၏ နှိုးဆော်မှုအားဖြင့် ခရစ်ယာန်အသင်းတော်များ စည်းလုံး ညီညွတ်ရေး ကို ရှေ့ရှုကာ ဘုရားရှင်၏ နိုင်ငံတော် ဤကမ္ဘာမြေပေါ်၌ တည်ထောင်ခြင်းဆီသို့ -
ကျွန်ုပ်တို့၊ သာသနာတော်ပြန့်ပွားရေးနှင့် ခရစ်ယာန်အသင်းတော်များ စည်းလုံးညီညွတ်ရေးကော်မရှင်သည် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပါတ်တော် တရားတော်ကို နည်းမျိုးစုံဖြင့် သက်သေခံပြီး တခြားသော ခရစ်ယာန်အသင်းတော်များနှင့် ရင်းနှီးလာကာ သာသနာတော်ကြီး စည်းလုံးမှုရရှိစေရန်လုပ်ဆောင်ကြပါမည်။
- Animated persons, well trained persons
- Office, literature, Mass media, transportation, communication
- Budget Support,
- Animated persons,
- Lack of well-trained persons,
- Restructure the communities,
- Lack of dialogue among the Christian communities,
- Lack of interest in people of other faith,
- Lack of enthusiasm (motivation, zealous leaders) in leaders for liturgy, prayers, and reconciliation.
-Office, literatures, handouts, mass madia, transportations, telephone, computer, budget, library, and press.
-lack of networking with outside world, lack of contact with other Christians and other religions,
-lack of budget support
၁။ ကော်မရှင်ရုံးခန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း သမ္မာကျမ်းစာနှင့် ဘာသာရေးစာပေဖြန့်ဝေခြင်း။
၂။ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပါတ်တော်၌ အသက်ရှင်နေထိုင်ခြင်း။
၃။ ခရစ်ယာန်များအချင်းချင်း မိတ်သဟာရဖွဲ့ခြင်း
1.Evanglization and Ecumenism ကော်မရှင်အဖွဲ့သည် အဖွဲ့ဝင်များပါဝင်ကာ စာအုပ်စာပေများ အသုံး စရိတ်များ Media ပစ္စည်းရိယာများ စာပုံနှိပ်စက်များကက်သလစ် သမ္မာကျမ်းစာ စသည်တို့ကို ရရှိရန်လုပ် ဆောင်ကြမည်။
-Responsible Persons ကော်မရှင်ဥက္ကဌနှင့် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ
-Lead Group မသကစ ဒေသခံတာဝန်ရှိကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီးများနှင့် အဖွဲ့သားများက ဦးဆောင်ကြပါမည်။
-Expected Results ဤသို့ ဦးဆောင်ပြီးလုပ်ခြင်းဖြင့် ရုံးခန်းများရှိလာပြီး အဖွဲ့နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် ဘာသာရေး စာပေ စာအုပ်များ စုဆောင်းတတ်လာခြင်း၊ စာပုံနှိပ် ထုတ်ဝေတတ်လာခြင်း၊ ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းများ ကျွမ်းကျွင်လာခြင်း၊ သင်တန်းများ ပို့ချတတ်ခြင်း သင်ကြားပေးမှု ကျွမ်းကျင်လာခြင်း မည်သို့ပါဝင် လှုပ်ရှားရမည့် စသည့်အတတ်ပညာများ တိုးပွားလာပြီး တတ်ကြွစွာ ပါဝင်လာမည် ဖြစ်ပါသည်။
-Partners ဤအရာများကို ရရှိရန် အလှူရှင်များ၊ ကျွမ်းကျွင်သူများကို ဖိတ်ကြားခြင်း၊ ဘာသာပြန် ရေးသားသူများ၊ စာရေးဆရာများ၊ ဓမ္မဆရာမများ၊ သီလရှင်များနှင့် စေတနာရှင်ဝန်ထမ်းများ ပါဝင်ကြမည်။
Implementation ဇွန်လ ၂၀၀၇ - ဇွန်လ ၂၀၁၂
၂.ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပါတ်တော် ဖြစ်သော သမ္မာကျမ်းစာကို ဖတ်ရှုလျက် ကမ္မဌာန်းရှုကာ အထူးသဖြင့် Asipa (သမ္မာကျမ်းစာ ဝေမျှခြင်း) နည်းကို အသုံးပြုလျက် ကောင်းမွန်သော ဘ၀အသက်တာကို တည်ဆောက်ခြင်း နေ့စဉ် ကောင်းသော ပုံသက်သေများ ပြခြင်း ဘုရားအကြောင်း ဟောပြောခြင်း လက်ကမ်းစာဆောင်များ ဝေမျှခြင်း စသည်တို့ကို လုပ်ဆောင်ကြမည်။
-Responsible Persons ကော်မရှင်ဥက္ကဌနှင့်ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ
-Lead Group ဒေသခံတာဝန်ရှိကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီးများနှင့် အဖွဲ့သားများက ဦးဆောင် ကြမည်။
-Expected results ခရစ်တော်၏တရားတော်ကိုကောင်းမွန်စွာလက်ခံကျင့်ကြံနိုင်ကြမည်။
-Partners အလှူရှင်များ၊ ရဟန်း၊ ကိုရင်၊ သီလရှင်၊ ကော်မရှင်အဖွဲ့များ။
၃. သမ္မာကျမ်းစာကို အခြေခံလျက် သခင်ခရစ်တော်ကို ဗဟိုပြုကာ သိုးခြံတစ်ခု သိုးထိန်းတစ်ပါးတည်း ဖြစ်ရမည့်အတိုင်း အတူတကွ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်း ဆုတောင်းပွဲများ အတူအကွ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဘာသာရေးပွဲများ၌ ဖိတ်ကြား ခြင်း၊ အတူတကွ သက်သေခံခြင်းများ ပြုလုပ်ပါမည်။
-Responsible Persons ကော်မရှင်ဥက္ကဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ။
-Lead Group ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီးများနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ။
-Expected Results အထက်ပါ ဦးတည်ချက်ကို ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ခရစ်ယာန်များ လေးစားချစ်ခင် ရင်းနှီးလာခြင်း စည်းလုံး ညီညွတ်ခြင်း၊ နားလည်လာခြင်း အတူတကွ ပူးပေါင်းလာခြင်းများ ရှိလာပါမည်။
-Partners အလှူရှင်များနှင့် ကော်မရှင်အဖွဲ့များ